Inhloko Zendaba Mabasa 18, 2022
Mabasa 18, 2022
*** Bekungabizwa ozwayo lamhlanje emagumeni lapho iZimbabwe ebinanza ilanga likazibuse, eleIndependence Day. Kulabantu abehluleke ukungena enkundleni eyeBabourfields koBulawayo bacina belalela uMongameli Emerson Mnangagwa bephandle bebukele kumabonakude okudanise inengi bethi akubaphathanga kuhle.
*** Uzulu wehlukana ngemibono phezu kwenyathela lokuphatheka kwenkokheli ye Citizens Coalition for Change - CCC, emikhosini yokunanza uzibuse,abanye besithi kuyinto elungileyo eyenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa kulabanye abathi yikuphosisa.
*** Ngesikhathi ilizwe linanza iminyaka engamatshumi amane lambili lizibusa abanye abeZimbabwe asebehlala kweleBotswana bathi abasiboni isizatho sokujabula lapho bebanjwe ngamandla yisimo esilukhuni somnotho ukuthi bachaphe imngcele bayedinga okokuziphilisa emazweni angomakhelwane laphetsheya kolwandle.
*** Ngesikhathi ele Zimbabwe linanza iminyaka engamatshumi amane lambili selokhe lathola uzibuse, ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle elizweni ukuze ungabi kusimo esibi esikhona okwamanje ezibhedlela zikahulumende.
***KuLivetalk sikhangela udaba lokunanzwa kosuku lukazibuse olweIndependence Day okwenzelwe ko Bulawayo okwakuqala lokhe ilizwe latholayo uzibuse ukuthi kungabe kusitshoni lokhu.